विश्वकै धनी अमेजनका सीईओ जेफको डिभोर्स, यसरि गरियो सम्पत्ति बाँडफाँड ! « The News Nepal
विश्वकै धनी अमेजनका सीईओ जेफको डिभोर्स, यसरि गरियो सम्पत्ति बाँडफाँड !
वाशिङटन । विश्वकै धनी व्यक्तिका रूपमा चिनिएका अमेजन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जेफ बेजोज र उनकी पत्नी म्याककेन्जीको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यको अनुसार २५ वर्षपछि बुधवार उनी हरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको हो ।उनीहरुले बुधबार ट्विटरमा वक्तव्य नै दिएर डिभोर्सको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुको डिभोर्सले पश्चिमा सञ्चार माध्यममा ‘हट केक’ समाचार भएको थियो ।
उनीहरूकाे १९९३मा विवाह बन्धनमा बाँधिए । ‘‘हामीले एकदमै भाग्यमानी महसुस गरेका थियौं । र हामी एक अर्काप्रति आभारीपनि थियौं’’ उनीहरुको वक्तव्यमा भनिएको छ । “हामीबीच वैवाहिक जोडीको रुपमा महान जीवन थियो । र हामीले महत्वपूर्ण भविश्य पनि देखेका थियौं ।”जेफको सम्पति १३७ बिलियन डलर (नेपाली १,५४,५२,९१,५०,००,००० रुपैयाँ) रहेको मानिन्छ । अझ कतिपयले त पछिल्लो समयमा उनी १६० बिलियन डलरका मालिक भएको समेत जनाएका छन् । द ब्लुमबर्ग बिलियनियर इन्डेक्सका अनुसार उनी विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् ।
यसलाई सम्पत्ति बाँडफाडको हिसाबले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अथार्त महंगो डिभोर्स मानिएको छ । उनीहरुले के कसरी सम्पति बाँडफाँड गरे भन्ने औपचारीक रूपमा खुलाइएको छैन । म्याककेन्जीले करिब ६८ बिलियन डलर कमाइसकेकाे बताइएकाे छ । उनी विश्वकाे पाँचाै धनाढ्य रहेकाे समेत बताइएकाे छ । अमेरिकी कानुन अनुसार डिभाेर्स गर्दा आधा सम्पत्ति पत्नीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । साेही अनुसार सम्पत्ति बाडफाड गरिएको अमेरिकन वकील भर्जीनिया ओनूले बताएका छन् । अमेजन कम्पनीमा रहेको सेयरलाई मैद्रीक मूल्यका आधारमा पत्नीलाई दिइएको बता इएको छ ।अमेजन विश्वकै महत्वपूर्ण कम्पनीका रुपमा अहिले स्थापित भएको छ । यसको मूल्य झण्डै ८१० बिलियन डलर रहेको बताइन्छ ।
जेफले म्याककेन्जीलाई सबैभन्दा पहिला न्यूयोर्कमा भेटेका थिए । हेड्ज फन्डको अनुसन्धानको कामका लागि अन्तर्वार्ता लिने क्रममा पहिलो पटक उनीहरुको भेट भएको थियो । जहाँ म्याककेन्जी उपाध्यक्षका रुपमा काम गर्थिन् । उनले विवाह गरेपछि वाल स्ट्रिटको उनको जागीर छोडेका थिए । त्यसपछि उनी सियाटलमा बस्न थाले । सियाटलमा उनीहरु एक बेडरुम भएको फ्ल्याटमा भाडामा बस्ने गरेका थिए । तर, अमेजनको स्थापनापछि उनको जीवनले काँचुली फेरेको थियो । अहिले अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा उनका ५ वटा घर छन् । प्रारम्भमा अमेजन एउटा अनलाइन बुकस्टोर मात्रै थियो ।